Doonista jinsiga caadiga ah ee wadaagga ah
Galmada yaryar, xiriirka dheer
Soo ogow waxa xiisaha u leh labadoodaba
Gacaliye jacayl aan dhammaad lahayn
Waxa ay warbaahintu iibinayso sanado badan oo ah jinsi ahaan wax ku ool ah waxay lamaane ku dhigeysaa cadaadis weyn. Waa wakhti aad uga takhalusi karto cadaadiskaas oo ah jihada galmada ee qalabka loo yaqaan "film", "radio" iyo "tv".
Doonista jinsiga caadiga ah
Dhiirigelinta, jaahwareerka, addoonsiga: Galmada Blumchen waxay u egtahay jinsiga tan iyo guusha caalamiga ah ee "Abaalmarinta Muuqaalka".
Jinsi caadi ah
Filimka Hollywoodka, filimka ugu horreeya ee xishoodka ah iyo kuwa aan fiicnayn ayaa u gudbiya si bilaa naxariis ah oo qurux badan Christian Gray, oo soo bandhigaya Anastasia ee adduunka sado-masochistic kala duwan.
Mawduucan culus ayaa la fuliyay fiidkii oo wuxuu noqday mid udubdhexaad u ah nolol jinsi oo dhammeystiran tan iyo markii la soo geliyey suuqa guud.
Waxay kaa dhigi kartaa inaad dareentid queasy: marka ay timaaddo inaad hesho nolol jinsi ah, waa inaad horay u isku dayday dhaqamada badan ee la ogsoon yahay - ama ugu yaraan sidii loo bedelay sida qulqulaya galka, sida filimada iyo geesiyaal novel ilaaliyaan.
Maalin, maalin ka baxsan - meel kasta oo aad eegto, waxaad arkaysaa sida dadku u qanacsan yihiin, miisaanyo qallafsan, ayna soo gebogaboobaan galmada. Dabcan, xaqiiqadu si buuxda way uga duwan tahay: marka lagu daro walwalka waqtiga firaaqada ah, shaqada iyo guriga, waxaa inta badan jira waqti yar oo ka hartay ama raba in uu ku raaxaysto jinsi caadi ah, jinsi badan. Sidoo kale, Vorturnen erotic-ka ah oo aad ku hesho TV-ga si joogto ah, ayaa sida caadiga ah dhacdo waqti yar.
Meeshii lammaanaha ay isku galmoon lahaayeen, waxay ku dhajiyaan dhinaca hore. Dabcan dad badan baa waydiinayaan: mise waa xiriirkeena ama nolosheena jinsiga sidaa daraadeed? Qof miyuu ka xanaaqaa lammaanaha mar labaad?
Cilmi-baarayaasha galmada ee Hamburg ayaa laga helay daraasad ah in taasi ay tahay mid caadi ah oo aan waxba ka qabin shucaaca dabacsan ee lamaanaha. Muddada dheer ee xiriirku sii socdo, lammaaneyaasha aan qaaliga ahayni waa midba midka kale.
Lammaanayaasha cusub ee cusub, iyadoon loo eegin da'dooda, waxay leeyihiin celcelis ahaan wareega 10 bishiiba jinsi kasta oo kale. Dadka ku jira cilaaqaadka muddada-dheer waxay sameeyaan isku mid ah celcelis ahaan "kaliya" wakhtiyada 4. Waa wax cajiib ah in aysan cadeynin haddii xiriirku horey u ahaa 5 ama 25 sano. Tani waxay badanaa sabab u tahay xaqiiqda ah in galmada si dabiiciga ah ay isbeddesho inta uu socdo xiriirka.
Cilmi-baarista dabeecadda waxay ogolaataa, gaar ahaan marxaladaha hore ee xiriirka, jinsiga waxaa loo adeegsadaa sidii loo xirxiray si loogu xiro dadka. Muddada dheer ee xiriirka ayaa sii socota, inta badan jinsigu wuxuu u guurayaa asalka - waxyaabo kale ayaa diiradda saaraya. Inta badan, ka dibna, su'aasha ayaa soo baxaysa haddii taasi ay sax ahaan lahayd.
Dabcan, waa in ay caddeeyaan in aysan weli "taasi" weli. Laakiin waa xaqiiqda ah in nolosha jinsiga ay isbeddesho inta lagu jiro xiriirka. Su'aasha ah in mid ka mid ah ay tahay inuu isku dayo mid cusub inuu noqdo mid dhif ah.
Galmada waa inay ahaato mid xiiso leh labadaba
Mawduucyada badanaa waxay ku saabsan tahay xeelad aan fiicnayn oo qalalan iyo qallayl siilka iyo sida loola macaamilo. Faa'idadu waa dadka qaba dhakhtarka qoyska oo ay leeyihiin kalsooni buuxda.
Qodobka ugu muhiimsan waa in la aqoonsado in jinsi kasta ee lammaanaha shakhsiyadeed uu ka duwan yahay kan ku jiray bilawgii xiriirka. Taas macnaheedu waxaa weeye sidoo kale faa'iido leh, sababtoo ah khabiiradu waxay yiraahdaan galmada xiriirka dheer, taas oo mid ka mid ah ugu yeeraysa "jinsi ahaan shakhsi ahaaneed" habka, waxay ku dhaqmaysaa habdhaqan ahaan xagga jinsiga.
Wada-hawlgalayaashu waxay wada shaqeeyaan si ay u ogaadaan nooca jinsiga ay doonayaan inay fuliyaan iyo riyada iyo rabitaanka ay rabaan inay isku duba riyaan. Si kastaba ha noqotee, daaweeyayaasha jinsiga ayaa ka digaya in ay ka soo horjeedaan qulqulka dheeraadka ah ee dibedda ah - marin-hawleedna maaha tusaale ahaan "Afartan Meelood" ama "Pornography" waa in lagu daraa.
Tani way sahlan tahay in la yiraahdo intii la qabtey, dabcan, sababtoo ah saameynta galmada maalin walba qof kasta ayuu ku dhacaa. Waa arrin ujeedkeedu yahay subaxnimadii maalinlaha ah ee erotic ah oo sababa in dadka ay ku hoos jiraan cadaadiska maskaxda iyo cadaadiska. Mid ka mid ah ayaa lumi karaa isbarbardhig joogto ah oo udhexeeya qofka naftiisa iyo kuwa jacaylka ah ee ka soo horjeeda warbaahinta. Ka dibna galmada waa inay ahaato madadaalo? Dhowdahay.
Jinsi ahaan waa wax xiiso leh oo u shaqeeya labada isqabta ee wada dareema. Lamaanayaashan waxay caadi ahaan helaan jinsiyadooda. Waxa muhiimka ah waa inaad wada hadashaan oo aad si daacad ah u sheegtid waxa madaxaaga ka socda. Waxaa cad in aanay tani mar walba sahlaneyn qof walba.
Nasiib darro, ma jirto luqad ku filan oo ku saabsan dabeecada galmada ee dhaqankayaga, maadaama aysan jirin dhaqanka beeraha ee aaggan. Waa inay caddaato in galmada quruxda aysan ka dhici karin cirka. Eroticism ma ahan oo had iyo jeer hadana ma dabooli karo sida hiitarka, xitaa hadii had iyo jeer lagu sawiro filimka. Galmada wanaagsan waxay u baahan tahay inaad wax u qabato.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo habka loo qaabeeyo nolosha galmada si aad ugu qanacdo. Mar walba ma fududa, laakiin mar walba waa hab.
Jadwalka jadwalka: Adiga oo sugaya inaad si lama filaan ah uga adkaato oo aad uga adkaato jacaylka waa la cafiyay. Dadka casriga ahi waxay qorsheeyaan oo dhistaan ​​maalinta oo dhan - markaa maxaa u jinsi? Dabcan, tani waxay u muuqataa mid aan dhib badnayn, lakiin xaqiiqda ah in jinsiga aan fiicneyn uu ka fiican yahay jinsiga oo dhan.
Wadahadallada dadwaynaha: Diiditaanka nidaam erotic ah markaad ka hadlaysid jinsi ahaan waxay noqon kartaa xeelad aad ku raaxaysato. Sida aanad u helin suxuun isku mid ah qadada maalin kasta, jinsigu wuxuu ku fadhiyaa sariirta, muddadii dheerayd iyo dhirifka. Helitaanka meelo cusub, meelo dareen ah ayaa noqon kara farxad ugu dambaysa.
Waqtiga qaadashada waxay caawisaa: Inkastoo daqiiqado yar oo kaliya ay ku aflaxaan filimada, illaa kuwa ka soo horjeeda ay ku yaallaan barkin ku habboon barkimada, dhab ahaantii way ka duwan tahay - taasina waa wax fiican. Waxa loogu yeero "jinsiga gaabis" waxaa lagu sameeyaa dhaqdhaqaaqyo gaabis ah, hase yeeshee dhammaantood waa kuwo aad u kacsan. Tayada jinsigu aad ayay u sii kordheysaa.
Inaad u furto wax cusub: Waxyaabihii laga soo qaaday buugaagta iyo filimada qasab ma aha inay noqdaan kuwo xun. Waxaa muhiim ah in wax wanaagsan laga dhigo. Ma aha in ay noqdaan xargaha, qafiska iyo gubashada shuclada. Tusaale ahaan, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo si fudud u xiraya indhahaaga. Waxay kuxirantahay dhamaan noocyada kala duwan ee galmada oo kaliya in labada kaqeybgalayaashu dareemaan raaxo. Sidaas awgeed jinsigu waa fiican yahay, waa muhiim in xitaa maya la aqbalo.
Sexting - isbedel halis ah Kacsiga ...
Dilka saaxiibkaa Iskaashiga iyo xiriirka
Erotic iyo nafaqada | iskaashi
Khiyaanada - maxaa hadda? | iskaashi
Iskaashiga iyo caruurta | qoyska
Magacyada Petta iyo macnaha ay | iskaashi
Waalidiintu sidoo kale waxay ubaahan yihiin fasax Carruurta wadaaga ah
Farqiga da'da | Iskaashiga & jacaylka